UKUBUYELA ngaseRiverWood - I-Airbnb
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguChad
I-Retreat yi-Riverwood lolona longezo lwamva nje kwipotfoliyo ye-Riverwood yeepropathi ezigqwesileyo kwezona ndawo ziphakamileyo zobomi obutofotofo kunye neendawo zokuhlala ezolileyo ezinombono omangalisayo wamanzi.
IRetreat iye yadityaniswa kunye nezibini engqondweni njengendawo yokubaleka yothando njengoko indawo yayo ethe qelele iziva ibucala kakhulu kwaye ibekelwe bucala nje i-800 ms phezulu ukusuka kwi-Inn.
Ekuqaleni indlu yeendwendwe ebekekileyo yomnini wendlu yokulala, iRetreat by Riverwood ngoku inikezelwa ukuba irente ngobusuku. Ibekwe phezu kwephuli yeSherboom kunye neengxangxasi kuMlambo waseIndiya indawo ephezulu njengendawo yokuhlala ijonge emlanjeni iyimfihlo epheleleyo kunye nokusondelelana.
Le 600 sq ft loft inendawo enkulu yokuhlala, ikhitshi / isiqithi kwaye idiliza ibhedi yokumkanikazi enendawo yomlilo esembindini egqunywe phantsi ukuya kwiglasi yesilingi ukubamba umbono ongaqhelekanga kunye ne-vibe yoMlambo waseIndiya. Umgangatho omkhulu ojikelezileyo wehla usiya emlanjeni ukuze kutshiswe imililo yangokuhlwa okanye izandi ezipholileyo zomlambo.
Ukuba ufuna ukubaleka kwezothando okanye ukhetho olusebenzayo lokuhlala ixesha elide Retreat by Riverwood yiloo nto kanye.
Indawo entle esecaleni komlambo kwindawo "ebonakala ngathi" ekude ibonelela ngeendawo ezimbini zokufikelela kwi-Indian River trail system kunye nomlambo wokurhweba, ukuqubha, ukukhwela inqanawa, njl.
Ndihlala ndisekhaya kwaye ndiyafumaneka ukuba ufuna nantoni na ngenye indlela endibambana naye uJenn uya kuba nomqolo wakho :-)